I-Penthouse enhle Yedolobha Enobhavu Oshisayo Ophezu Kophahla - I-Airbnb
I-Penthouse enhle Yedolobha Enobhavu Oshisayo Ophezu Kophahla
Johannesburg, Gauteng, iNingizimu Afrika
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Ade
U-Ade Ungumbungazi ovelele
Sikhuphula amabhayisikili enkabeni yedolobha laseGoli ngokufuna kabusha kanye nokuklama kabusha izindawo ezingasasetshenziswa, ukulungiswa okukodwa kokunethezeka ngesikhathi. Leli fulethi elihle liwukuthuthuka okuhle kakhulu ukusuka egunjini lehhotela, ngohambo lwakho lokuya eGoli. Itholakala kalula esikhumulweni sezindiza, iGuatrain kanye namaHQ asebhange. Nge-inthanethi enesivinini esikhulu, i-JACUZZI, i-BRAAI kanye Nombhede Wosuku oshwibilikayo ku-PRIVATE ROOF TERRACE yakhona kanye nokufinyelela kuchibi lophahla lwendlu yokugezela okwabelwana ngayo.
Isisekelo esihle somsebenzi sokunweba uhambo lwakho futhi uhlole i-Joburgs Urban Revival.
Ngiyajabula ukuthi uthanda ukubukeka kwendawo yami, ngokwezinga lokuthi ufunda indlu yami. Sicela wazi ukuthi akufanelekile emihlanganweni noma emicimbini - isib. amaphathi okuzalwa, ama-bachelorette, njll.
Sicela uphawule nokuthi ngesikhathi seholide likaKhisimusi, i-Jacuzzi igcwaliswa mathupha ngetangi lamanzi ashisayo, noma nini lapho kudingeka ukuba isetshenziswe.
Ngokuqondene nezivakashi zakwamanye amazwe, ungabhukha ngokunethezeka ukwazi ukuthi, uma kufanele ukhansele uhambo lwakho ngenxa yokuhlolwa kwangaphambilini okuhlulekile kwe-PCR ngomzuzu wokugcina, uvikelwe umthetho wethu wezimo ezingalindelekile futhi i-Airbnb izobuyisela imali ephelele uma amadokhumenti afanele esenikeziwe.
14th - 18 Meyi 2022 - I pool womphakathi lusaqhubeka yesondlo kuhleliwe ngakho ayitholakali izakhamuzi isakhiwo sika, Lokhu akusho nomthelela ophahleni yangasese ubhavu ashisayo.
Uma ifulethi lingatholakali ngazo zonke izinsuku ozidingayo, noma ufuna ukuchitha imali encane, ungabona amanye amafulethi esakhiweni (kuhlanganise namanye amafulethi) kuphrofayili yami
Abantu abaningi baphinde babhukhe inhlanganisela yalokhu kanye nenye yamanye amafulethi ami esakhiweni, ngesikhathi sokuhlala kwabo.
Leli yifulethi elingu-75 sqm, elisakazeka ngaphezu kwezitezi ezingu-3 kuhlanganise nethala lophahla langasese.
Ingenye yamafulethi angu-5 esiwenza atholakale, esakhiweni esifanayo, angu-4 kuwo angamafulethi. Ngamunye unesimilo sakhe futhi ungumboniso wabaklami/abaklami abahlukene abazilungisile.
Ungabuka wonke amafulethi angu-5 kuphrofayili yami.
Leli fulethi lihle futhi lihle kodwa inani langempela ulwazi lwendawo nokusikisela okunikezwa ababungazi. I-Joburg inezindawo eziningi ezinhle kangaka ongazihlola nabantu ongahlangana nabo futhi, njenganoma yiliphi idolobha elikhulu, izindawo ongafuni ukuba zikhubeke kuzo ngobumpumputhe. Hlala uphephile ngenkathi ubhekene neJoburg ngokulandela izincomo zethu zakamuva zezindawo ongaya kuzo (nokuziqondisa) ngesikhathi usedolobheni.
Inhloso yethu ukukusiza ‘ukuhlakulela okokuzithokozisa' kwe-Joburg yangempela ngokukuxhumanisa nabanye abashayeli abafanele, abaqondisi bezokuvakasha, izindawo zokudlela, okokuzithokozisa njll. ukusekela ukuhlela kwakho futhi usebenzise isikhathi sakho esiningi edolobheni, nefulethi lethu njengesisekelo sakho sasekhaya.
Leli fulethi elimangalisayo lisatshalaliswe esitezi se-9, se-10 nesesi-11 samagugu (asobalwe), esasiyi-Barclays Bank HQ, esakhiweni esisesitaladini esidala kunazo zonke eGoli.
Ukunikeza okuhlukile (abanye bathi kungokoqobo) okuhlangenwe nakho eGoli emadolobheni aseNyakatho, kungaphansi kwemizuzu engu-10 yokugibela i-Uber eya e-Maboneng, e-Braamfontein, e-Newtown, emgwaqweni i-Joziburg nomgwaqo ongu-1Fox, okwenza kube lula ukuzwa ukuvuselelwa kwasedolobheni nokufinyelela ezingxenyeni ezipholile kakhulu zase-Jo 'burg, ngesikhathi kungadingeki ukuthi kuvuswe umsindo ohambisana nomsindo ohambisana nokuhlala kulezi zindawo' ezijabulisayo '.
Abaningi abaqapheli ukuthi iGoli liphinde libe isikhungo samasiko ase-Afrika. Indawo yaleli fulethi inikeza ukufinyelela okulula kulezo zici zedolobha lethu, okuhlanganisa izindawo nemisindo eyenziwa edolobheni lase-Afrika elithuthuka. Uma ufuna okuhlangenwe nakho kwe-Porsche/Rolex/Jimmy Choo okudumile kweGoli, kungenzeka ukuthi ujabule kakhulu ezindaweni ezifana ne-Sandton.
Ifulethi lingaphansi kwemizuzu engu-10 lihambela esiteshini samabhasi esiseduze ne-Citysightseeing open-top hop-on-hop-off tour, lihamba ngemizuzu engu-25 ukusuka esikhumulweni sezindiza sase-Johannesburg kanye nemizuzu engu-10 ukusuka esiteshini sase-Gautrain, linikeza ukufinyelela okuqondile e-Rosebank, e-Sandton, e-Pitoli kanye nesikhumulo sezindiza.
Ukuhlelwa kwefulethi kwaklanywa ukuze izindawo zokuhlala eziyinhloko zonke zizuze ekufinyeleleni kalula endaweni yangaphandle kanye nokubukwa kwedolobha okumangalisayo.
Esitezi sokungena sefulethi kunekamelo lokulala eliyi-Master elihlanganisa ubhavu nekamelo lokulala elingaphakathi ne-WC; ikamelo lesibili elinombhede omkhulu owengeziwe; nelinye ikamelo le-shower eline-WC.
Indawo ephakathi yefulethi inendawo yokuhlala yohlelo oluvulekile (enesitofu esihle sokhuni esishisayo), indawo yokudlela (enetafula lokudlela elingu-6) nekhishi elinamakhawunta e-granite, isitofu esenziwe ngezandla nesitofu sensimbi. Konke okudala ikamelo elimangalisayo lokuphumula ekhaya. Leli kamelo linomshini womoya oshisayo nobandayo.
Wonke amakamelo aphansi anamafasitela aphindwe kathathu ukugcina idolobha lizwakala futhi lifudumala, ngesikhathi esifushane sokuwina kwaseNingizimu Afrika. Ngamunye wamagumbi okulala nawo unesilwane esilingi.
Phuma emnyango ongemuva kanye nezitebhisi ze-ayina (ezihlanganyelwayo nefulethi elilandelayo) eziholela emphemeni wophahla wangasese (kuphela waleli fulethi) osebenza njengengadi yethu. Alukho utshani kodwa line-Jacuzzi, i-bq/braai, itafula lokudlela kanye nombhede wosuku ojingayo.
Ifulethi nalo line-solar powered hot water system
Izinto ezingu-3 izivakashi ezizithandayo ngendawo yami...
Kusele imizuzu emi-5 ukuya enhlokodolobha yase-Maboneng, kodwa ikude ngokwanele ukuba uthule ebusuku.
Gxuma emthambekeni omangalisayo wophahla.
Uhlelo evulekile phansi main, nge ikhishi emangalisayo futhi ukugquma fireplace
Izinto ezingu-3 ezingazithandi...
Akunjalo edolobheni elinohlonze njenge-Sandton.
I-Jacuzzi ithatha isikhathi eside ukushisa.
Izitebhisi eziholela ophahleni zincane kakhulu.
4.85 · 80 okushiwo abanye
Cabanga ngeBrooklyn New York, Downtown LA, Brixton, Shorditch noma Hackney eLondon, eminyakeni engama-30 edlule. IGoli ligcine ligqashulile emaketangeni adlule anezinkinga. Futhi, eholwa yizikhungo 'ezipholile zase-Urban' ezifana ne-CBD, i-Maboneng kanye ne-Braamfontein, manje isikleliswe phakathi kwezindawo ezihamba phambili ongavakashela kuzo, e-Southern Hemisphere (sesha iwebhu ezihlokweni zakamuva zaseGoli ezincwadini ezifana ne-Rough Guide, i-GQ Magazine kanye neThe Guardian ngombono ongachemi).
Abaningi ababoni ukuthi iGoli liphinde libe yisikhungo samasiko e-Afrika yonke. Indawo yaleli fulethi yenza kube lula ukufinyelela lezo zici zedolobha lethu, okuhlanganisa nokubuka nemisindo ehambisana nokuba sedolobheni elithuthukayo lase-Afrika. Uma uhambele eGoli ufuna okuhlangenwe nakho kwe-Porsche/Rolex/Jimmy Choo kwedolobha lethu, cishe uzojabula kakhulu endaweni ehlukile njenge-Sandton.
Igama elithi CBD livame ukusetshenziswa ngokungalungile uma kubhekiselwa kulo lonke idolobha laseGoli. Uhlangothi olusentshonalanga maphakathi neGoli, lapho esikhona, luhluke kakhulu ohlangothini olungasempumalanga, lapho izindaba eziningi ziphuma khona. Lokhu mhlawumbe kungenxa yokuthi sineHholo Ledolobha ebhulokhini elingemuva kwethu, ikomkhulu lamaBhange amabili amakhulu eNingizimu Afrika elisezindaweni ezimbalwa enyakatho naseningizimu kanye nenkampani yezimayini enkulu kunazo zonke ezweni. Ngakho, nakuba kunezimoto phakathi nosuku, le ngxenye yedolobha ithule kakhulu ebusuku.
Ngithanda ukuthi ifulethi lami liphakathi nendawo yokwakhiwa kabusha kwedolobha. Izimakethe ezithandwayo, amagalari namakilabhu angaphansi komhlaba namabha kuxube namabhange kanye namaHQ ezindlu zezimayini. Lena ingxenye endala kunayo yonke, empeleni eyidolobha elincane kakhulu.
Ngebhange elidala kanye nendlu yezimayini, i-'Square Mile' yaseNingizimu Afrika. Ngeminyaka yawo-1980 kanye nawo-1990 amabhizinisi amaningi aqala ukuthuthela ezindaweni ezintsha ezingaphansi kweSandton kanye nasenkabeni yeJo'burg aqala ukubheda. Kwathi ekuqaleni kwawo-2000 kwaqala ukwenziwa kabusha kwe-CBD.
Imatasa phakathi nezinsuku futhi ithule kakhulu kusihlwa, indawo 'ayilungiswanga' njengezingxenye ezintsha zedolobha, kodwa ngokuqinisekile ikuleyo ndlela futhi ithuthuka ngosuku. Ngingancoma noma ubani ukuthi abhukhe uhambo oluningi lokuhamba oluqondiswayo lwedolobha ukuze athole ukwazisa okugcwele kwenkaba yedolobha.
Le ndawo, ehambisana neMaboneng kanye neBraamfontein yizikhungo zokuvuselela kabusha amadolobha aseGoli, lapho kubusa khona intsha kanye nesiko lobuciko. Noma ubani ofuna isipiliyoni sedolobha laseGoli cishe angakhululeka ezindaweni ezifana neSandton neBryanston.
I-Commissioner Street iwona mgwaqo omdala kunayo yonke, engxenyeni endala yeGoli. Ingaphakathi kwendawo yamabhulokhi angu-9 noma angu-10 eyayimodelwe ekuqaleni kwezindawo zedolobha ze-neoclassical. Igcina ukubukeka nomuzwa wayo omdala waseNew York/Idolobha laseLondon. Iyachuma phakathi nesonto futhi ithule kakhulu ngezimpelasonto.
Asinazo izinxanxathela zezitolo ezikhazimulayo noma uthango oluphezulu lukagesi lwezindawo zaseNyakatho. Igcine indawo yayo engokwesiko enkabeni yedolobha, enemigwaqo ebanzi, amathofi asemgwaqweni futhi igezwa ngamandla okudala wangempela. Nakuba amathilomu nezindawo zobuciko bezilokhu zikhona, ukukhula kwabalimi/izimakethe zezimakethe ngezimpelasonto, ezindaweni ezizungezile, kule minyaka emihlanu edlule, kuyenza isizinda esihle sohambo lwangezimpelaviki. I-Neighbourgoods market (Braamfontein), Arts on Main (Maboneng) kanye ne-1fox (Fox street) zonke ziqhele ngemizuzu emi-5-10.
Ibhilidi ngokwalo libheke ezinye zezakhiwo zaseGoli ezinomlando nezinhle kakhulu.
Yakhiwa ngeminyaka yawo-1940 ngomunye wabadwebi bezakhiwo abaphambili baseGoli, uGordon Leith, yakhiwe ngetshe lesanti ngesitayela sokwakha se-"Modern Movement Era", kodwa ihlanganisa izici eziningi ze-Art Deco. Ibhilidi eligcinwe ngaphansi koMthetho Wamagugu Kazwelonke, linohlelo lwezokuphepha olusezingeni eliphezulu olusekelwa i-CCTV kanye nokuba khona konogada amahora angama-24.
We're up-cycling Johannesburg's city center, with luxury apartment renovations. Come and experience something amazing and truly unique, for a few days.
Hi, I'm Ade. Born and raised in the UK, I moved to South Africa in 2005 and fell in love with the place!
Renovating spaces is my hobby and your booking, via Airbnb, helps pay for me to continue with this hobby. I've had such a positive response from the 5,000+ guests that have stayed in these apartments, over the past 7 years, that I just kept going and just completed my fifth project. All of my renovations are made available under the banner African Penthouses.
For my day job I lear the African operations of global NGO that helps banks and other financial institutions to improve access to formal financial services for low income women. It means I travel. A lot! At least it did before Covid-19 hit :-(
So Airbnb asked me to list 5 things I like. Well, in no particular order (and purposely not mentioning my amazing fiancée)....
Building and home renovation. Have loved creating unique spaces and learning from each project. The fact that these types of building's would be out of my reach, in any major city in Europe or America, makes it that bit more enjoyable.
My job. After 20 years in corporate, it feels good to building something that gives back by helping African women.
I have a real passion for music. More playing than making, though I am in the process of learning to play the piano, and was a fairly reasonable DJ in my younger days (does that count as making?). I'm slowly building up my Sonos system (Lego for adults), which is great for filling your home with sounds controlled from the iPad!
I'm a Spurs fan. (Tottenham, not San Antonio). Yes there are one or two fans outside of Tottenham.
London. The one advantage of having to travel so much for my work, was that I actually got back to London quite often :-)
Hi, I'm Ade…
Ngihlala kwenye yamapenthouses kodwa ngihamba kakhulu ngomsebenzi, ngakho-ke mancane amathuba okuba ngibe sedolobheni ngesikhathi uhlala, nokho engibambisene naye, uDylne, naye uhlala esakhiweni futhi uzotholakala ukuze asize ngokunikeza okhiye njll.
Ngihlala ngitholakala ngesistimu yemiyalezo ye-Airbnb noma ngocingo.
Njengoba nginezinye izindlu ebhilidini elifanayo, uma leli fulethi lingatholakali sonke isikhathi ongalithanda, ngicela ungithumele inothi. Ngivame ukuba nesivakashi esizohlala kuleli fulethi izinsuku ezimbalwa futhi sijabulele ukuhlala kwe-penthouse, bese sithuthela kwelinye lamanye amafulethi lapho sihlala khona.
Isivakashi sizoba nokufinyelela okukhethekile kulo lonke ifulethi kanye ne-wifi, i-TV yesathelayithi, i-Jacuzzi kanye nedekhi yophahla. Uzokwazi nokufinyelela echibini lokubhukuda elingaphezulu (okwabelwana ngalo) elingaphezulu kophahla.
Ngihlala kwenye yamapenthouses kodwa ngihamba kakhulu ngomsebenzi, ngakho-ke mancane amathuba okuba ngibe sedolobheni ngesikhathi uhlala, nokho engibambisene naye, uDylne, naye uhl…
UAde Ungumbungazi ovelele